I-China ixwayisa iMelika “ngezinyathelo eziphikisayo” kuma-Olimpiki Asebusika | Scrolla Izindaba
I-China ixwayisa iMelika “ngezinyathelo eziphikisayo” kuma-Olimpiki Asebusika
I-China isabise iMelika “ngezinyathelo eziphikisanayo” uma iqhubeka ukuduba i-Winter Olympics e-Beijing ngonyaka ozayo.
UZhao Lijan, okhulumela uMnyango Wezangaphandle e-China, uthe labo abafuna ukuduba bazoba enkingeni enkulu. Uthe kumele bakuqede ngaphambi kokuthi kube nomthelela ezingxoxweni nasekubambisaneni phakathi kwe-China neMelika nakwezinye izindawo ezibalulekile.
“Uma iMelika iphikelela ekubambezeleni ngamabomu, i-China izothatha izinyathelo eziqinile,” kusho isikhulumi engqungqutheleni yabezindaba.
Ukuphatha kukaMengameli uJoe Biden bekungaphansi kwengcindezi ekhulayo evela kumalungu e-Congress ukuthi aphuthelwe imidlalo kanti ngenxa yalokho i-White House ikubize lokho ngokuthi “ukubulawa kwabantu” abangamaSulumane esizweni sase-China.
Amaqembu Amalungelo Abantu akholelwa ukuthi ama-Uyghur angaphezu kwesigidi esisodwa agcinwe “kwisikhungo sokufundisa kabusha” esilawulwa uhulumeni. Amakhulu ezinkulungwane zesizwe samaSulumane sinikezwe izigwebo zasejele futhi kunobufakazi bokuthi abesifazane bavala inzalo bengafuni.
UBiden kulindeleke ukuthi amemezele ukuduba kwezwe lonke kweMidlalo Yasebusika ngenxa yerekhodi elibi lamalungelo abantu e-China, ngokusho kwe-CNN.
Ukuduba kosopolitiki ngeke kusho ukuthi abasubathi baseMelika bazophuthelwa imidlalo, kodwa izithunywa ezisemthethweni kuphela nosopolitiki abazobe bengekho e-Beijing emidlalweni ehlelelwe uNhlolanja ngowezi-2022.
I-Winter Olympics isivele ibone izingxabano eziningi. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa kweqhwa mbumbulu phakathi nemincintiswano yase-Alpine edolobheni elintula kakhulu amanzi emhlabeni kubangele ukugxekwa okukhulu.
Ihlazo elithinta isihlabani sethenisi uPeng Shuai lidale ifu elimnyama kulo mqhudelwano ohlonishwayo ngemuva kokusola lowo owayeyiphini likaNdunankulu wezwe ngokumphoqa ukuthi aye ocansini eminyakeni emithathu edlule.
UShuai walahleka izinsuku eziyishumi ngemuva kwezinsolo zakhe, kodwa wabe esephumela obala ne-International Olympic Committee (i-IOC). Abaningi nokho bakholelwa ukuthi uyaphoqwa ukuthi asho ukuthi uphephile.
I-Women’s Tennis Association ihoxise yonke imincintisano yabo yethenisi yowezi-2022 e-China ngenxa yesigameko sikaShuai njengoba behlala bengajabule ngalesi simo futhi bacele ukuthi kube nophenyo oluvulelekile, olusobala, ngaphandle kokuhlolwa.
Umthombo wesithombe: @BBC
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala [email protected].za noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za